भिडियो Archives - Page7of 12 - Namaste Times
बिहिबार, माघ ०३, २०७५ | Friday, December 22, 2017
काठमाडौं -मानिसहरु मानिस बेचिरहेका छन् तर मानिसहरु नै मौन छन् । देशका गाँउ गाँउमा दलालहरु बिटाका बिटा पैसा बोकेर छिरेका छन् । खल्ती भरी भएको पैसाले गाँउका छोरी चेली बेचेर आँफु धनी हुने सपना बोकेर सल्बलाएका दलालहरुलाई लखेट्नुको साटो उल्टै चिया, खाजा वा खाना खुवाएर स्वागत गरीरहेका छन् गाँउलेहरु । शिक्षाको उज्यालो पुग्न नसकेको गाँउका बा, काका, दाजुभाइलाई नै २/४ पैसा दिएर र रक्सी खुवाएर ...
महाधिवेशन पछि एकता -सुनिता बराल (भिडियो सहित)
काठमाडाैं - भर्खरै मात्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । बाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत र झन्डैझन्डै दुई तिहाई नजिक पु¥याउदैगर्दा पनि भावी प्रधानमन्त्री को हो ? औपचारिक रुपमा सार्वजनिक चाही गरेको छैन । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम अहिले चर्चामा छ। गठबन्धनका मध्ये एक ठूला दल नेकपा( एमाले) का भातृसंगठन अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटीका उपाध्यक्ष सुनिता बराल आज हामीसंग ह...
पत्रकार सम्मेलनमा ओली र प्रचण्डले देउवालाई के भने……. (भिडियो सहित)
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अाेलीले भने, ‘खेल सुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्ने ? बल हान्न लाग्यो। किप्परले समाउन नसक्ने अवस्थामा बल हान्न नपाउने भन्ने ?’ खेल चलिरहेको अवस्थामा बीचैमा नियम परिवर्तन हुन नसक्ने उनले बताए। राजनीतिक खेलका नियम र अाचारसंहिता पालना गर्न उनले सरकारलाई अाग्रह गरे । 'चुनाव गराएर राम्रो गर्नुभो, एक दुई नियुक्तिको लोभमा नपर्नू' नेकपा माओवादी केन्द...
माथी है माथी बाेलकाे गितकाे भिडियाे सार्वजनिक
गायक सन्जय निङ्लेकु पहिलो गित बैसको रहर काे अपार सपफल्ता पछि को दोस्रो माथी है माथी बाेलकाे गितकाे भिडियाे सार्वजनिक भएकाे छ । गित मा स्वर सन्जय निङ्लेकु र मन्जु लावती को रहेको छ भने शब्द , छायांकन खगेन्द्र पन्धाक र संगीत गणेश गुरुङ ले गर्नुभएको छ। भिडियाेमा गायक स्वयम र अायुशा लिम्बुकाे अभिनय रहेकाे छ । गायन भन्दा पनि मोडलिङ मा धेरै रहर भएकाे निङ्लेकु काे बाजे कबिताराम फोम्बो र ...
एमाले माओवादीको इतिहासकै ठूलो जित,काँग्रेसको सर्वनाक हार किन भयो ? एक विश्लेषण
गायिका पूजाको गीत मार्फत हात पारिन सारिकाले युएईमा – दोस्रो नेपाली म्युजिक भिडियो अवार्ड
२६ मंसिर,काठमाडौ। गायिका पूजा सुनुवारले गाएको एउटा पप-आधुनिक गीत मार्फत मोडल सारिका सुनारले भर्खरै युएईमा सम्पन्न दोस्रो नेपाली म्युजिक भिडियो अवार्ड जितेकीछिन् । गोरखा स्थायी घर भएकी मोडल सारिका सुनार युएई बसेर अभिनय कर्ममा लागेका कलाकारहरु मध्य सुपरिचित ब्यक्ति हुन् । चार वर्षदेखि युएईमा रोजगारीसँगै आफ्नो कलायात्रा अघि बडाएकी सारिकाले झन्डै दुई दर्जन गीतहरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । विभिन्न सम...
दुई मिनेट सेक्सको लागी जिन्दगी बिग्रार्न चाहान्न ….WATCH VIDEO
देउता चढेपछि भयो यस्तो हाल ..
UAE /Abudabi पुगेर मध्यरातमा रवि लामिछानेले (facebook live) मा आएर यस्तो रहस्य खोले..(भिडियाे)
UAE /Abudabi पुगेर मध्यरातमा रवि लामिछानेले (facebook live) मा आएर यस्तो रहस्य खोले...